स्वास्थ्य – Deshko News
दमक, असार ३ झापा जिल्ला कुष्ठरोगको जोखिममा रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले जिल्लामा कुष्ठरोगको अवस्था उच्च देखिएको छ । कुष्ठरोग निवारणसम्बन्धी कार्यरत जिल्लाको कुष्ठरोग रोकथाम कार्यक्रमका सुपरभाइजर पर्शुराम पोख्रेलका अनुसार नेपालबाट उन्मूलन भइसके पनि झापामा अझै कुष्ठरोगको जोखिम रहेको पाइएको छ । जिल्लाका भद्रपुर, विर्तामोड, दमक, शिवसताक्षी, अर्जुनधारा, बुद्धशान्ति लगायतका क्षेत्रमा कुष्ठरोगको बढी जोखिम पाइएको उहाँले जानकारी ...
उर्लाबारी,जेठ २९ मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकालाई आज पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । उर्लाबारी – ५ स्थित पूर्वाञ्चल बौद्ध गुम्बामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको प्रमाणपत्र नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथी पोखरेलले अब ...
हामी काँक्रा खाने गर्छौं तर, त्यसको फाइदा कति छ भन्नेबारे धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन । कांक्राका फाइदा यस्ता छन् ः –काँक्रोमा पानीको मात्रा ९६ प्रतिशत हुन्छ । जसले मानिसको शरीरमा पानी आपूर्ति
मोरङ, जेठ १७ मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण खोप युक्त गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिकाको प्रागणमा आज आयोजित एक भव्य कार्यक्रमका बीच जिल्ला समन्व्य समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले गाउँपालिकालाई खुल्ला दिशामुक्त र पूर्ण खोप युक्त भएको घोषणा गर्नुभएको हो । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको साविकका रमितेखोला, जाँते र मधुमल्ला गाबिस यसअघि नै खुल्ला दिशामुक्त भईसकेको र साविक टाँडी ...
उर्लाबारी, जेठ १६ जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघ मोरङको आयोजनामा आज उर्लाबारीमा अल्जाईमर्स (बिर्सने रोग) सम्बन्धी एक दिने सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उर्लाबारी – ७ स्थित परोपकार सेवा केन्द्रमा जेष्ठ नागरिक क्षेत्रिय समिति मोरङ १ को संयोजनमा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा लाईफलाईन अस्पताल दमकका डा. मुक्तिनाथ भट्टराई र मंगलबारे अस्पताल उर्लाबारीका डा. राज झाले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो । ...
कतिपय मानिसको ओठ कालो हुनेगर्छ । जसले गर्दा अनुहारको सुन्दरता नै लुकेको हुन्छ । विशेष गरेर महिलाहरु ओठ नरम र कालोपन हटाउन विभिन्न किसिमका कस्मेटिक सामग्रीहरु प्रयोग गर्ने
संखुवासभा, जेठ ९ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय संखुवासभाका कर्मचारी सरुवा गरिए पनि खटाएका स्थानमा जान अटेर गरेका छन् । सरुवा गरेको कर्मचारी जान अटेर गर्दै जिल्ला अस्पताल, खाँदबारीमा काजमा काम गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य विभागबाट डेढ वर्ष अघि नै सरुवा पत्र आएपनि उनीहरु खटाएका ठाउँमा गएका छैनन् । अहिले पनि स्वास्थ्य कार्यालयका छजना कर्मचारी सरुवा गरिएका स्थानमा नगएर जिल्ला अस्पतालमा ...
इटहरी, जेठ ७ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण सेवाग्राहीले यतिखेर निकै समस्या र सास्ती ब्यहोर्नु परिरहेको छ । पैसा खर्च गरेर पनि समयमा ल्याब रिपोर्ट प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था नरहेको सेवाग्राहीका अधिक गुनासो बढिरहेको पाइएको छ । विगत केही हप्तादेखि प्रतिष्ठानमा मिर्गौलासम्बन्धी जाँच गर्ने उपकरणमा आएको खराबीका कारणले सेवाग्राहीले आपत्कालीन जाँचको रिपोर्ट प्र्राप्त गर्न हप्तौँ कुर्नु परिरहेको ...
मोरङ,जेठ ६ मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले आज उर्लाबारी–९ आमबारीमा रहेको नवनिर्मित गाउँघर क्लिनिकको भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ । मेयर फागोले एक कार्यक्रमका बीच गाउँघर क्लिनिकको दुई कोठे पक्की भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा मेयर फागोले स्वास्थ्य सेवा–सुविधा लिनपाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको बताउनुभयो । ८५ प्रतिशत जनता अझैपनि गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै फागोले ...